Vaovao - 2020 CBE ao amin'ny booth ny Shanghai N4-H21
Amin'ny taona 2020, manatrika ny foara CBE any Shanghai izahay manomboka ny faha-12-12 Jolay.
Mampiseho ny vokatrao lehibe izahay, toy ny masinina famenoana molotra mihodina, masinina famenoana masom-bava karazana molotra, milina fanosehana vovoka, milina fanoratana marindrano, fonosana kosmetika ho an'ny lokon'ny molotra, balsama molotra, lokomena, mascara, eyeliner ary tranga misy aloky ny maso , boaty matevina matevina, siny vovoka malalaka sns.
Ary koa mametraka fanontaniana vitsivitsy momba ny fomba famenoana tsara ny mascara molotra somary avo lenta, toy ny fomba hisorohana ny bubble amin'ny rivotra rehefa mameno, ny fomba hisorohana ny fitetezana, ny fomba hisorohana ny fahasimbana mikatona mba hamakiana satroka, ny fomba fanitsiana ny habetsahan'ny famenoana, ny famenoana ny hafainganana, Ahoana ny fametrahana ny hafainganam-pandeha, ny torque famonoana, ny fomba fanadiovana ary ny fiantohana ny masinina famenoana molotra hamenoana tavoahangy sy habe samihafa, na ny milina famenoana molotra dia azo atao amin'ny alàlan'ny fanafanana sy ny fifangaroana. Izahay koa mizaha toetra ny masininay amin'ny lokon'ny molotra mba hampisehoana ny fahafenoantsika famenoana +/- 0.03g.
Misy ny mpanjifa mividy ny masinina famenoana molotra eo an-toerana ary misafidy fantsom-boasary molotra maro koa hamoahana ny marika vaovao. Misy ihany koa ny mpanjifa mila milina famenon'ny molotra namboarina miaraka amina fanovana amin'ny antsipiriany, toy ny halavan'ny masinina famenoana karazana push mba hiantohana ny habaka miasa lehibe kokoa ho an'ny mpandraharaha ary koa ny hafainganam-pandeha famenoana avo kokoa. Ny milina fanatsaran-tarehy rehetra dia mampiasa singa marika malaza mba hahazoana antoka ny fahombiazan'ny asa, ny Switch is Schneider, ny relay dia ny Omron, ny motera Servo dia Panasonic, ny PLC dia ny Mitsubishi, ny singa Pneumatika dia SMC, ny efijery mikasika ny fiara dia Mitsubishi, Contrôle d'exploitation: Autonics
Tongasoa ny mpanjifa vaovao sy ny mpanjifa taloha hitsidika ny tranokalanay hahazo vaovao vaovao misimisy momba ny milina fanatsaran-tarehy. Manatsara ny milina fanatsaran-tarehy ataontsika mifototra amin'ny masininay mahazatra ary koa arakaraka ny fitakian'ny mpanjifa hatrany. Izay hevitra tianao ho tratrarina dia zarao aminay malalaka. Minoa fa ho mpiara-miasa tsara isika ary ho mpinamana tsara.
Fanadiovana ny milina famenoana:
Mba hahazoana antoka ny fanamarinana ny fanadiovana ny fitaovana sy ny famonoana mikraoba amin'ny fizotry ny famokarana, manomeza famaritana fanadiovana sy famonoana otrikaretina mahazatra ho an'ireo mpandraharaha, fadio ny fandotoana ara-batana sy simika, mba hifehezana ny fahalotoan'ny mikraoba sy hiantohana ny kalitaon'ny vokatra.
A. Hamarino tsara fa voadio daholo ny fitaovana rehetra ao amin'ny fitaovana alohan'ny hanadiovana azy.
B. Detergent: rano divay, detergent saka fotsy, alikaola 75%.
C. Fitaovana fanadiovana: borosy, basy rivotra.
D. Ny lamba landihazo fotsy dia atsoboka ao anaty alikaola 75% ampiasaina.
E. Ny vokatra mitovy, isa maromaro, fanadiovana, ny faritra azo ampiasaina tsy misy disassembling.
F. Ireo mpandraharaha dia miasa arakaraka ny famaritana ny asa fanadiovana ary manome antoka fa mifanaraka amin'ny fepetra takiana ny dingana tsirairay.
G. Ny olona miandraikitra ny famokarana dia manome antoka fa ireo mpandraharaha sy teknisianina mahay dia miasa araka ny fepetra voalaza ao amin'ny opération, manara-maso sy manara-maso ny toe-pahadiovana ary ny firaketana sy ny sonia ara-potoana.
Alohan'ny fanadiovana dia mila esorina tanteraka ny faritra rehetra miaraka amina endrika sy loko isan-karazany.
A. Vita ny famenoana, ny vokatra semi-vita dia nalaina avy tamin'ny hopper ary tsy maintsy diovina.
B. Efa nodiovina ny fitaovana fa tsy maintsy diovina indray raha banga mandritra ny herinandro.
C. Raha notondroin'ny mpanjifa sy ny vokatra manokana, ny fanadiovana dia tokony hatao araka ny antontan-taratasy manokana an'ny mpanjifa sy ny vokatra.